Sidee suurta gal ku noqon kartaa inb Doorasho Qof iyo Cod ah ka dhacdo dalka 2020-ka? | allsaaxo online
Sidee suurta gal ku noqon kartaa inb Doorasho Qof iyo Cod ah ka dhacdo dalka 2020-ka?
Shirkan oo qeyb ka ah wadatashiyada ay wadeen Guddiga madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ee ku aadan Manhajka wacyigalinta iyo Waxbaridda Cod bxiyaha Doorashada islamarkaana socon doona muddo labo malamood ah ayaa Mas;uuliyiinta Guddigu waxa ay la yeesheen Xisbiyada sida KMG ah loo idiwaangaliyay iyo kuwa hada ku guda jira is diiwaangalinta.
Xuseen Cabdi Aadan oo katirsan Xubnaha Guddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinnka Qarnka ayaa sheegay in Xisbiyada looga baahan yahay inay la yimaadaan Aratgiyo dhaxal gal ah oo lagu biirin karo diyaarinta Manhajka wacyigalinta Doorashada.
Gudoomiyaha Xisbiga wadajir Kamaal Daahir Guutaale ayaa talaabo hore loo qaaday ku tilmaamay diyaarinta iyo Hirgalinta manhajkan oo laf-dhabar u ah hirgalinta doorasho qof iyo cod ah.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha bulshada Xukuumada Soomaaliya saalax Axmed Jaamac oo la hadlayay ka qeybgalayaasha Shirka ayaa xusay in qabsoomidda Doorashada la rejeynayo sanadka 2020 ay ku xiran tahay in hab midnimo ah loo wajaho iyadoo dhammaan dhinacyada ay quseyso ay iskaashanayaan.
R/Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed waxa uu sheegay in Xukuumadaa ay xoogga saareyso hirgalinta Doorasho Qof iyo cod ah, islamarkaana dhiirigalineyso axsaabta is-diiwaan galiyay .